ecacile plastic emikhonweni, ecacile amashubhu emabhokisini clamshell emaphaketheni
Klearfold ® Keeper Sula Impahla System
Lapho amavolumu ukukhiqizwa azizivuni utshalomali umjovo udini amathuluzi, lobunikazi Klearfold Keeper ecacile uhlelo lwethu emaphaketheni inikeza imiklamo ehlukile kwesakhiwo, efana ukuqonda, kodwa ngezindleko kancane. I Klearfold Keeper uhlelo emaphaketheni ecacile siqukethe emikhonweni plastic kucace ukuthi eyakhelwe ukukhiya a ugqoko cleaner eyakheke noma kucace plastic clamshell. Vac-emathileyi kanye Ezimbazeni Uya Ezinsingweni kukhona lamanga ukuze kuvumelane ukuma umkhiqizo futhi wayefisa iphrofayela iphakethe cross-Sectional.
Klearfold Keeper inikeza lula futhi ibe wusizo ngesandla ukugcwaliswa ... umkhiqizo alayishwe Vac-ugqoko kanye amaslayidi sub-bandla ecacile plastic emkhonweni. Ngo-eligoqiwe amathebhu emkhonweni uhlanganise flange eziklanyelwe phezu Vac-ifomu, uvala yezingxenye ezimbili ngokuphephile ndawonye, ​​ngaphandle kwesidingo esilucwecwana lwezimpawu noma ukusetshenziswa sonic, RF, noma ukushisa imishini uphawu.
A isithupha-notch perforation ekhoneni emkhonweni ecacile plastic ihlinzeka esiyingqayizivele, okulula ukuvulwa sici. Ukususa isithupha-notch futhi kususa yokuvala, okuvumela ugqoko ukuba kalula disengaged kusukela emikhonweni ecacile.
US Inombolo Patent: 8.936.188
Buka Klearfold Keeper Imashi